အပေါစားအယ်ဒီတာတွေ များနေပြီလား | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » အပေါစားအယ်ဒီတာတွေ များနေပြီလား
Posted by phone_kyaw on Dec 17, 2011 in Copy/Paste | 17 comments
အယ်ဒီတာတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ အတွက် အဓိက စာဖတ်နာရပါတယ်။ စာရေးတက်ရပါတယ်။ ဗဟုသုတကြွယ်ရမယ်။ ဒါက အယ်ဒီတာတစ်ယောက်မှာ မရှိမဖြစ် အရည်အချင်းဖြစ်မယ်လို့ ထင်တယ်။
အခုခေတ်မှာ အယ်ဒီတာတွေ မှိုလိုပေါက်လာတယ်။ အရည်အချင်းလည်းမရှိဘူး။စာလည်းမရေးတက်ဘူး။ ပြီးတော့ အယ်ဒီတာလည်း လုပ်ချင်သေးတယ်။ အဲလို အယ်ဒီတာတွေရွေးချယ်တဲစာတွေကိုစာဖတ်သူတွေက ငွေပေးပြီး ဖတ်ရသေးတယ်။
သူများနိုင်ငံတွေမှာ အယ်ဒီတာတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ အတွက်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတာကို ဗမာအယ်ဒီတာတွေ လေ့လာသင့်တယ်။ ဖတ်ပါမှတ်ပါလေ့လာပါဆိုရင် သတင်းစာကိုဇောက်ထိုးဖတ်ပြီး ကားမှောက်တယ်လို့ ပြောတဲ့ အယ်ဒီတာတွေ လက်ရှိ ကာလမှာ တစ်ပုံကြီးဖြစ်နေပြီ။ စောက်ပေါအယ်ဒီတာတွေသတိထားပါ။ ဒါပဲ။
အင်းဟိုတခါ မဂ္ဂဇင်းတစောင်က အယ်ဒီတာခေါ်တာ မိန်းကလေး၊ အပျိုဖြစ်ရမည်၊ အသက် ၂၈ နှစ်အောက် ( သေချာမမှတ်မိ၊ ၃၀ မကျော်တာတော့သေချာတယ် )၊ ၁၀ တန်းအောင်တဲ့။ အင်းဘယ်လိုပြောရပါ့။ အဲဒီအယ်ဒီတာဦးစီးတဲ့ဂျာနယ်တော်တော်ကောင်းမှာပဲနော်။
အင်းပေါ့နော် သွားလျှောက်ခဲ့လို့ ဝန်ထမ်းခန့်ပြီဆိုတာနဲ့ အလုပ် နှစ်မျိုး လုပ်ရတော့မှာ
သေချာသလောက်ပါ ။ ဒီပုတ်ထဲက ဒီပဲချည်းပါပဲ ။
ကိုယ့်လူရဲ့ ပို့စ်တွေ ကိုဖတ်ပြီး ပြောချင်တာ တခုပဲ ၇ှိတော့တယ်..
သူများကိုမပြောခင် ခင်ဗျားပို့စ်တွေကို ဆယ်ခါပြန်လောက်ပြန်ဖတ်ကြည့်ပါလားဗျာ..
ကျုပ်တို့လဲ ငွေမပေး ရပေမဲ့အချိန်ပေး ပြီးဖတ်နေရတာမို့လို့ပါ…..
ဒါဆို အင်တာနက်သုံးခ မကုန်ဘူးလား။ ငွေမပေးရဘူးပြောတော့… ကိုယ်ပိုင်နက်သုံးနေတာပေါ့နော်။
ပြောချင်တာ ကတော့အင်တာနက်ကတဆင့် ငွေကြေးပေးစရာမလိုပဲ ဖတ်ခွင့်ရရင်တောင် အချိန်တော့လူတိုင်းပေးကြရတာပဲလို့ဆိုလိုရင်းပါ..
ကိုယ်ပိုင်နက် အကြောင်းကတော့ ကြုံမှရှင်းပြတော့မယ်ဗျာ…
လာပြန်ချည်သေးရဲ့ တဖန် …. မြန်မြန်ဆန်ဆန် မြန်မြန်..
ဟဲ့သာလှ … ဗျ ဗျာ ဗျ ..
မောင်ဘုန်းကျော်. လူတွင်ကျယ်လုပ်ချင်နေတယ်လို.ထင်ပါတယ်။ ဤလိုpostတော့မတင်စေချင်ဘူး။ လူလေးပြောမှသိရမယ့်အရာတွေမှမဟုတ်တာဘဲကွယ် ။နေရာတိုင်းမှာ၁၀၀အပြည့်တော့ဘယ်ရှိမလဲကွယ်။ ဝါးလုံးရှည်နဲ.တော့မရမ်းစေချင်ဘူးကွယ် ။မောင်ဘုန်းကျော်လေး အဂါရဝဖြစ်နေဥိးမယ်။
အင်း.. အပြင်လောကနဲ့ အယ်ဒီတာအချို့ကို မကြေနပ်လို့ တော့ မန္တလေးဂေဇက်ထဲမှာ ဒေါသ မကြီးစေချင်ပါဘူးဗျာ..။ ဘယ်ဂျာနယ် ဘယ်မဂ္ဂဇင်းက အယ်ဒီတာက ဘယ်လိုကြီး ဖြစ်နေတယ် ဆိုတာ ခိုင်မာတဲ့ အထောက်အထားလေးတွေ ပြပေးစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ..။ ကျွန်တော်လည်း အယ်ဒီတာ မဟုတ်ပါ။
ဥပမာ။ ။ ဒီနေ့ထုတ် The Voice Weekly Vol.8/ No.1 က စာမျက်နှာ(8) မှာ အမှားပြင်ဆင်ချက်ကို ဖတ်ပြီး ရယ်မိနေပါတယ်။ သူတို့မှားတာ တောင်းပန်တာက ပေါ့ပေါ့လေးရယ်..။ မြန်မာပြည်မှာ ပဲကုန်သည် လူလိမ်တွေများနေသလို ဖြစ်သွားပါတယ်။
The Voice Weekly Vol.7/ No.52 မျက်နှာဖုံးပါ (ပဲကုန်သည် ၁၄ဦး ထပ်မံလိမ်လည်) သတင်းတွင် ခေါင်းစဉ်ကို (ပဲကုန်သည် ၁၄ ဦး ထပ်မံ လိမ်လည်ခံရ) ဟု ပြင်ဆင်ဖတ်ရှုပါရန်နှင့် အယ်ဒီတာအဖွဲ့၏ ပေါ့လျော့မှုကြောင့် ထိုသို့ မှားယွင်းဖော်ပြမိသဖြင့် နစ်နာသူများကို တောင်ပန်အပ်ပါသည်။
အဲသဟာကြောင့် စာလည်း မရေး (တက်) ပါခင်ဗျား
တက်ချင်ရင်တော့ ကြောင်သျှာသီး၊ ကြက်ဟင်းခါးသီး၊ ဒညင်းသီး၊ အစရှိသော
အာဟာရများကိုသာ သုံးဆောင်ပါမည် အဆွေ….
ဒါညိုရေးရင် မန်နဲ့လူညားရိံး ညားညားမန့်တော့
ဒေါသ ရှေ့မထားပါနဲ. ခင်ဗျာ…
မန်းလေးဂေဇက်က သူကြီးဦးခိုင် လက်ဆော့ထားတာပါ….
သူကြီးဆီဖုန်းဆက်ပြောရင်တောင် တားတား တိဝူး လို.ဘဲ ပြောမှာဘာ… ဟီးဟီး
မန်းလေးဂေဇက်ကိုလဲ ဘယ် အယ်ဒီတာမှ မဖတ်လောက်ပါဘူးဗျာ
ဒီတော့ ဒေါသလေးလျော့ပါနော် (ဦးခိုင် တားကိုမဘန်းနဲ.နော် .. တားက ပြေရာပြေကြောင်းပြောတာ :P)
အယ်ဒီတာတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ အတွက် အဓိက စာဖတ်နာရပါတယ်။ စာရေးတက်ရပါတယ်။ ဗဟုသုတကြွယ်ရမယ်။
အယ်ဒီတာတွေလည်း.. စောက်ပျင်းအလုပ်မဖြစ်မနေလုပ်ရမှာပေါ့နော်.. ဟဟဟ
အဲ့ဒီဖုန်းကျော် ဆိုတဲ့ကောင်က မွေးတုန်းက သူ့အမေက နို့မတိုက်ဘဲ တရိဆန်နို့တွေတိုက်ပြီးကြီးပြင်းလာတာနဲ့တူတယ် ပြီးတော့မြန်မာ ပြည်မှာမွေးလိုက်လို့လူဖြစ်လာတာကို မြန်မာပြည်အကြောင်းကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် ကစ်နေတယ် မြန်မာပြည်သားပါပဲ ဘယ်တော့မှ သြစတျေးလျနိုင်ငံသားဖြစ်မလာဘူး အဲ့တော့ကိုယ့်ဖင်ကိုလန်ထောင်းမနေနဲ့တော့ မင်းအဆင့်ကိုမင်းသိပါ မင်းကသူများ တစ်ကာတတွေးခွက် ထဲမှာဘဲမျော် နေတော့မယ်ဆိုတာကောကို့ကိုယ်ကိုသတိထားမိရဲ့လား
မင်းရေးထားတဲ့ ပိုစ့်တွေထဲမှာ အချက်အလက် ခိုင်ခိုင်မာမာ ဘာပြနိုင်လို့လဲ ဘာတစ်ခုမှအထောက်အထားမပြနိုင်ပဲနဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုမှန်တယ်ထင်ပြီး ဘ၀င်မြင့်မနေနဲ့ မင်းကကိုရေးတဲ့ပိုစ့်ကိုကိုယ်တာဝန်ယူတယ်ဆိုတော့ မင်းရေးတဲ့ပိုစ့်ကိုဘဲ ထောက်အထားခိုင်ခိုင်လေးနဲ့ပြန်ပြင်လိုက်ပါ မင်းမှာအဲ့လောက်တော့အရေအချင်းရှိမယ်လို့ထင်တယ်
အော်..ဖုန်းကျော်တဲ့လား…။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဖေါ်တဲ့နေရာမှာတော့..ကျုံးသွင်းခံလိုက်ရတဲ့…ဆင်တစ်ကောင်လို…အော်ချင်သလိုအော်..ဆဲချင်သလိုဆဲပြီး..နေတာကိုး…။ ဘယ်ကြောက်ပါ့မလဲလေ…။ လူတွေရှေ့မှာရောက်နေတာမှမဟုတ်တာ…။ ကောင်းပြီး မျက်စိစပ်တယ်ဆိုတာက..လက်ခံလို့တော်ပေမယ့်…။ `စ´တယ်ဆိုကတည်းကနေ..စောင်းပြီး..ပေကပ်ကပ်နိုင်နေလိုက်တာ…။ တရားဆိုတာက…ကိုယ်ဆိုးတာကိုသာမြင်ရတာဗျ..ကိုယ့်လူရ…။ သူများမကောင်းတာပြောတာတော့….ကျုပ်လည်းပြောလားပြောရဲ့…ပါ..။ ဒါပေမယ့်…ကောင်းကောာင်းပြောပါ…။ ကောကောပြီးပြောတာတော့..မကောင်းပါဘူး…။